समस्या छ भने समाधान पनि हुन्छ ! | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: ७ असार, २०७७
समस्या छ भने समाधान पनि हुन्छ !
बन्दाबन्दीका बेलामा प्रेम रावतले हरेक दिन आफ्नो सन्देश मानिसहरू समक्ष पु¥याइरहनुभएको छ । उहाँको सन्देशसँग सम्बन्धित केही अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
कोरोना भाइरसको यो जुन परिस्थिति छ, हामीसँग यो एउटा यस्तो समय छ जसबाट हामी केही सिक्न सक्छौँ, केही बुझ्न सक्छौँ ।
हरेक मानिससँग एउटा कुरा छ । उसले त्यो चीज अरूलाई पनि दिन सक्छ । त्यो कुरा हो– “प्रेम” । प्रेम सबैभन्दा ठूलो उपहार हो । प्रेम, त्यो वास्तविक कुरा हो जुन अरूसँग गर्न सकिन्छ । हामी एक–अर्कालाई आदर गर्न सक्छौँ । यो संसारमा हामीले एक–अर्कालाई सुन्न बिर्सिसकेका छौँ । परिवारमा एक–अर्काको कुरालाई कसैले सुनिरहेको हुँदैन । एउटा मानिस, एउटा परिवारको सदस्य हुनुको नाताले सबैभन्दा ठूलो उपहार जुन तपाईंले दिन सक्नुहुन्छ । त्यो कुनै ठोस वस्तु होइन । त्यो त यी भावनाहरू हुन्– प्रेम, आनन्द । आफ्नो जीवनमा यदि हामीले वास्तविक मानवतालाई अपनायौँ भने हामीले कुन कुरामा परिवर्तन ल्याउन सक्दैनौँ र !
कुनैबेला आमाबुवाहरू छोरोछोरीले गर्दा दुःखी हुन्छन् । यदि तिनले पढेनन् भने उनीहरूप्रति आक्रोसित हुन्छन् । यदि हामी दुई मिनेट बसेर आफ्ना बालबच्चासँग कुरा गरौँ– के समस्या छ ? उसले पढाएको कुरालाई नै नबुझेको पनि त हुन सक्छ । यदि उसले बुझिरहेको छैन भने पनि उसको मात्रै त कमजोरी होइन । उसलाई सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उसँग बस्नु आवश्यक छ । उसलाई अभैm बुझाउनु आवश्यक छ । यदि कसैको जीवनमा कुनै प्रकारको दुःख छ । अनि, समस्याको समाधान भइरहेको छैन भने रिसाएर समस्याको हल हुन्छ भन्ने पनि त होइन । ईष्र्या, द्वेष यी सबै कुरा परिवारमा देखापरेपछि परिवारमा नै उथलपुथल मच्चिन्छ । यस्तो कुरा परिवारमा कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन ।
संसारले भन्छ, “मसँग यो छ, तपाईंसँग यो छैन ।” यदि कसैसँग केही छ, कसैसँग केही छैन । यसको अर्थ उसँग कुनै नयाँ कुरा होला जुन अर्कोसँग नहोला ।
यसै सन्दर्भमा एउटा कथा छ । एक पटक एकजना विद्वान् पण्डित एउटा डुङ्गाबाट यात्रा गरिरहेका थिए । उनले डुङ्गा चालकलाई सोधे, “भाइ, तिमीले कतिसम्म लेख्–पढ् गरेका छौ ?”
डुङ्गा चालक भन्छन्, “मैले त पढे–लेखेको छैन !”
पण्डितले भने, “ओहो ! तिमीले त आफ्नो पूरै जीवनलाई बर्बाद पा¥यौ ।”
डुङ्गा चालक डुङ्गालाई लिएर नदीको बिचतिर पुगेका थिए ।
पण्डित सोध्छन्, “तिमीले कहिल्यै यात्रा गरेका छौ ? कतै तिर्थ गएका छौ ?”
डुङ्गा चालकले भने, “छैन हजुर ! म त कहाँ जान सक्छु र ! म त यसैमा रातदिन खटिइरहन्छु ।”
पण्डितले भने, “तिमीले त साँच्चि नै आफ्नो जीवनलाई खेर फालिरहेका छौ ।”
अलि अगाडि पुगिसकिएपछि डुङ्गा चालकले देखे डुङ्गामा त प्वाल परेछ अनि डुङ्गाभित्र पानी भरिन थालिसकेछ ।
पण्डितले उनलाई फेरि सोधे, “तिमीले सिकेको, जानेको अरू केही कुरा छ त ?”
डुङ्गा चालकले भने, “मलाई त यो डुङ्गा चलाउने काम मात्र आउँछ ।”
पण्डितले भने “तिमीले त सम्पूर्ण जीवनलाई नै बर्बाद बनायौ । केही पनि सिकेका छैनौ, केही पनि पढेका छैनौ ।”
त्यसपछि डुङ्गा चालक भन्छन्, “पण्डितजी ! म तपाईंलाई एउटा प्रश्न सोध्न सक्छु ?”
पण्डितले भने “के ?”
डुङ्गा चालकले भने, “तपाईंलाई पौडी खेल्न आउँछ ?”
पण्डितले भने, “आउँदैन भाइ ! मलाई पौडी खेल्न आउँदैन । मलाई पौडिनु किन आवश्यक छ र ! मैले वेद पढेको छु । थुप्रै शास्त्र पढेको छु । रामायणको अध्ययन गरेको छु । गीता पढेको छु । सबै कुराको अध्ययन गरेको छु । मलाई पौडिन नआउनु कुन ठूलो कुरा भयो र !”
डुङ्गा चालकले भने, “पण्डितजी ! तपाईंलाई पौडिन आउँदैन, तपाईंले पौडी खेल्न सिक्नुभएन । मेरो त जिन्दगी बर्बाद जहिले होला होला । तर, तपाईंको अहिल्यै भइसक्न लाग्यो किनकि यो डुङ्गामा प्वाल प¥यो । अब यो डुङ्गा बिस्तारै–बिस्तारै पानीमा डुब्दै छ । यदि तपाईंलाई पौडिन आउँदैन भने त तपाईं पानीमा डुब्नुहुनेछ ।”
कुरा, हामीले जे सिकेका छौँ त्यसका बारेमा होइन ! हरेक व्यक्तिको जीवनमा सृष्टिकर्ताले एउटा उपहार दिएका छन् । हामी यसो भन्न सक्दैनौँ, “तपाईंको उपहार ठूलो छ या मेरो उपहार ठूलो छ ।” सबैको आ–आफ्नै उपहार छ । त्यो तपाईंका लागि हो । त्यो उपहार पाएपछि तपाईंलाई आनन्द प्राप्त हुन सक्छ । त्यो उपहार के हो भनेर त्यसको खोजी गर्नुहोस् अनि त्यसलाई चिन्नुहोस् ।”
कसैले कविता लेख्न सक्लान् त कोही कविता सुन्न सक्लान् । यदि कविता सुन्ने श्रोता छैनन् भने कविता सुनाउनेले के गर्न सक्छन् ! यदि कोही सुन्ने मान्छे छन् भने न उनले आफ्नो कवितालाई सुनाउन पनि सक्छन् । जब कोही श्रोता नै छैनन् भने सुनाउनेले के सुनाउलान् । सबैलाई जीवनमा एउटा उपहार प्राप्त भएको छ । त्यो उपहारलाई चिन्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनुहोस् ।
(यो लेख प्रेम रावतको सम्बोधनलाई सम्पादन गरी साभार गरिएको हो । उहाँ मानवता र शान्तिको विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि [email protected] लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)